Ulula kodwa mkhulu umsebenzi osalelel iChiefs eTanzania - Impempe
Ulula kodwa mkhulu umsebenzi osalelel iChiefs eTanzania
IKaizer Chiefs seyilufakile unyawo olulodwa emdlalweni owandulela owamanqamu kwiCAF Champions League. Lokhu kulandela ukuthi iwine umlenze wokuqala ngo 4-0, ishaya iSimba SC ebisatshwa.
Cishe ngabantu abayithanda ukufa kuphela iChiefs ababengayibona ifika kuleli zinga esikulo kulo mqhudelwano. Kodwa Amakhosi athuse abaningi evela ezigelezela aze ayofika kulesi sigaba akuso manje.
Ukubhaxabula kwayo iSimba – ebisanda kushaya i-Al Ahly – sekwenze abaningi baphakamisa amakhanda. Yingakho ke nomdlali wayo, uHappy Mashiane ethi ngeke besajika manje. Uthi sebefuna ukuhamba baze bangene kowamanqamu.
“Besifuna ukuzuza okuthile nathi (kule sizini), ikakhulukazi ngoba imiphumela iyasiphika kwiligi. Ngicabanga ukuthi (ukwenza kahle kwiChampions League) yinto enkulu ezosivusa,” kusho uMashiane.
“Ngicabanga ukuthi sesenze okungaphezulu kobekulindele kithi uma ubheka isimo seqembu. Akusekho ke ukujikela emuva manje, sesibheke ukuyophelela kowamanqamu.
“Kumele okungenani siqophe umlando ngoba vele sesiwaphulile amarekhodi eqembu kulo mqhudelwano,” kuchaza lo mdlali oneminyaka engu-23. Bekungokokuqala kule sizini iChiefs ifika esigabeni samaqoqo njengoba iphinde yadlula kuso.
“Bayalazi ibhola laba bantu,
akumele nje sikulibale lokho”
Njengoba iChiefs ihamba phambili ngo 4-0 kwiSimba, umsebenzi osuyisalele ulula yize umkhulu. Konke leli qembu laseNaturena okumele likwenze wukuvimba iSimba ingatholi goli – noma uma bewadedela, engadluli kwamathathu – bese idlula iyobona ithola bani phambili.
Yingakho ke uMashiane engafuni bazitshele ukuthi sebeqedile. Wesabela ukuthi bengazithola sebesehlazweni elibi uma bengavumela leli qembu laseTanzania libe wutshwala, libajikele selisesiswini.
“Bayalazi ibhola laba bantu, akumele nje sikulibale lokho,” kuxwayisa uMashiane. “Akufanele sikufake ekhanda ukuthi sashaya amagoli amane sibhekene nabo ekhaya. Kusengenzeka noma yini, yibhola leli.
“Ngakho kumele sikhombise ukuqina ngokwengqondo. Umqeqeshi (uGavin Hunt) ubesishumayeza ngokuthi singalinge sizitshele ukuthi sekuphelile ngoba kusangenzeka noma yini uma sesingakubo.
“Sakwazi nathi ukushaya amagoli amane sisekhaya, nabo bengakwenza lokho ngakubo. Kumele sisebenze ngokuzikhandla okuphindiwe, singalinge sizitshele ukuthi kuzoba lula njengasemlenzeni wokuqala eFNB Stadium. Kumele sisebenze, singanaki okuningi.”
Umlenze wesibili uzoba seBenjamin Mkapa National Stadium eDaar es Salam ngoMgqibelo ngo-2 ntambama.
Previous Previous post: UNtseki uthi iCovid yiyo ebulale umsebenzi wakhe kwiBafana
Next Next post: Izobuya isikhokha isizumbulu kompetha iMangosuthu Marathon